पाठेघर खस्ने समस्याबारे कसरी थाहा पाउने ? जानौं | Hamro Doctor News
मंगलबार, ९ कात्तिक २०७८ /
देशभर ६ सय २२ जना संक्रमण मुक्त, ६ सय ६६ जनामा संक्रमण पुष्टि
३९ जना चिकित्सकको नाम मेडिकल काउन्सिलले दर्ताबाट हटायो
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहकुलपति स्तरीय छानविन समितिले स्थलगत अध्ययन थाल्यो
सेती अस्पतालमा थप एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
बाँकेमा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
पाठेघर खस्ने समस्याबारे कसरी थाहा पाउने ? जानौं
By डा.श्री अधिकारी, स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ
अशिक्षा र गरिबीको कारण अधिकांश महिला पाठेघर समस्याको उपचार नगरी रोग पालेर बस्ने गरेका छन् । पाठेघर खस्ने समस्याका कारण महिलाहरूले हेलामा बाँच्नुपरेको छ । ग्रामीण भेगमा रहेका महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने समस्या बढी रहेको पाइन्छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी महिलाको समस्याहरुमध्ये पाठेघर खस्ने समस्या मुख्य हो । आफन्त, नाता र परिवारका सदस्यसँग कुरा गर्दा लाज हुने र इज्जत जाने डर पैदा गरेर धेरैले रोग पालिरहेका छन् । पाठेघर समस्याकै कारण कतिपय महिलाहरू मानसिक, शारीरिक रूपमा श्रीमानबाट समेत पीडित भएर बस्न बाध्य छन् ।
के हो पाठेघर, खसेको कसरी थाहा हुन्छ ?
पाठेघर महिलाको प्रजनन् अंग हो । बच्चा जन्माउँदा प्रजनन् अंगमा असर गर्छ र पाठेघर ‘लुज’ भएर जान्छ । पाठेघरलाई अरु तन्तुहरूले जोेडेर राखेको हुन्छ, सपोर्ट कम भएपछि ‘लुज’ भएर तल आउँछ । पाठेघर भएको ठाउँ छोडेर सर्नुलाई नै पाठेघर खस्नु भनिन्छ ।
कसैको कम खस्छ भने कसैको धेरै खस्छ । एकचोटि बच्चा पाइसकेपछि त्यो ‘लुज’ हुन्छ तर यस्तो हुनेबित्तिकै खसेको भन्न मिल्दैन । पाठेघर खसेको धेरै महिलाहरूले थाहा नै पाउँदैनन्, धेरै खसेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् ।
खस्नेबित्तिकै कतिपय पिडित महिलाहरुले निकाल्नुपर्यो भन्छन्, तर धेरै तल खसेको अवस्था नभए निकाल्नु पर्दैन, मर्मत गर्नुपर्छ । सुरुको समयमा र हालको समयमा हर्दा पाठेघर खस्ने महिलाको अहिले कम भइरहेको पाइन्छ ।
के कारणले खस्छ ?
दुर्गम क्षेत्रमा भने दक्ष जनशक्ति नभएका कारण अझै समस्या छ । सुत्केरीपछि आराम नगर्ने, सुत्केरीलगत्तै गह्रुँगो काम गर्ने गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । पहाडी भेगमा उकालो–ओरालो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा पेटमा समस्या पर्छ ।
बच्चा पाएपछि पेटमा ६ हप्तासम्म असर पर्न दिनु हुँदैन । तर, सुत्केरी भएर न्वारान हुनुअगावै काम गर्छन् । त्यो प्रेसरले गर्दा पाठेघर टाइट हुनै पाउँदैन । ६ हप्तासम्म आराम गरेमा पाठेघर टाइट हुँदै आउने हो । हाल जनचेतनाका कारण सुत्केरीमा आराम गर्ने बानीले पाठेघर खस्न कम भएको छ ।
बच्चा नजन्माएकालाई पनि समस्या
बच्चा जन्मिएकाहरूमा मात्रै पाठेघर खस्ने समस्या आउँछ भन्ने छैन । गर्भवती नभएका युवतीमा पनि पाठेघर खस्ने समस्या आउन सक्छ ।
पाठेघर झर्नु र बच्चा पाउनु आफैंमा रोग होइन । पाठेघर खसेपछि विभिन्न अन्य रोग देखापर्न सक्छन् । पाठेघर झर्दा तन्किने र त्यहाँ रगतका नलीहरू नपुग्ने हुन्छ । नपुगेपछि त्यस ठाउँमा रगत कम भई घाउहरू बन्छ र अल्सर हुन्छ । रगत र अक्सिजनको मात्रा नपुगेर अल्सर भएपछि योनीबाट सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ ।
पाठेघर खस्नेसँगै पिसाब थैली, पछाडिपट्टि मलद्वारको भाग पनि झर्ने समस्या उत्तिकै हुन्छ । कतिपयलाई खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, हाँस्दा, उकालो–ओरालो गर्दा पिसाब चुहिने सम्भावना हुन्छ यो लुज भएकै कारणले हो ।
कारण पत्ता लगाएपछि उपचारमा समस्या हुँदैन । रोग लागेपछि गुपचुप बस्न हुँदैन उपचार गरिहाल्नुपर्छ । बच्चा पाउने नै मुख्य समस्या हो भने दक्ष जनशक्ति भएको ठाउँमा डेलीभरी हुनुपर्छ । डेलीभरी गर्न नआउनेसँग गर्यो भने साल निस्किएन भनेर पेटमा थिचेर निकाल्नछन् यो सरासर गलत हो ।
यस्तो गर्दा धेरै ‘लुज’ हुन्छ । साल निस्किने भनेको त बच्चा जन्मिसकेपछि ५ देखि १५ मिनेटमा हो । त्यो आफैँ उप्किएर आउँछ, हतार गरेर हुँदैन, तर धेरैलाई थाहा नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सुत्केरी समयमा ६ हप्तासम्म आराम गर्नुपर्छ ।
सामान्य व्यायाम गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा योनीमा मसल्सहरू टाइट हुन्छ । कपडा च्यातिएपछि सिलाएर बनाएजस्तै पाठेघर पनि ‘लुज’ भयो भने यसको उपचार पनि यस्तै हो । बढीभन्दा बढी पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ र गर्भवती हुँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
Last modified on 2021-06-28 10:25:42
चिसो बढ्दै गर्दा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम उच्च, जोगिन अपनाऔं यी उपाय
मोटोपन हुनुका कारण के के हुन् ? जानौं (भिडियोसहित)
तपाईंलाई पेट पोल्ने समस्या छ ? जानौं जोगिने उपायबारे
बायो–इथिक्स दिवस मनाइयो
सुध्रिदै नुवाकोटको त्रिशुली अस्पताल
लाइसेन्सका लागि आवेदन गरिएको कागजपत्र पुरा गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले थप्यो ३५ दिन